Akụkọ - Nkwupụta
Ezigbo ndị mmekọ na ndị na-azụ ahịa,
Na nso nso a, achọpụtara na enwere ụlọ ọrụ na ndị mmadụ na-eji aha na adreesị ụlọ ọrụ anyị (Shijiazhuang Mets Machinery co., Ltd NO.1 Changjiang Road Shijiazhuang 050035 Hebei China Tel: 86-311-68058177) na ozi ụlọ ọrụ ndị ọzọ na zipu ozi-e na obodo na-arịọ maka akwụkwọ ọnụahịa, nye iwu ihe wdg. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị natara ozi ịntanetị ahụ n'amaghị eziokwu jụrụ ụlọ ọrụ anyị gbasara email ọtụtụ oge, anyị jiri ndidi kọwaa ha.
Omume na-ezighi ezi nke iji ojiji nke ozi ụlọ ọrụ eme ihe na-akpata nsogbu ọ bụla na ụlọ ọrụ anyị, kamakwa ọ na-akpata ihe ize ndụ zoro ezo nye ụlọ ọrụ na-anata ozi ịntanetị ndị a nke ịghọgbu. Iji zere nke a ịme ọzọ, anyị ji obi ike na-ekwupụta dịka ndị a:
I. Anyị amataghị n'omume ndị ọrụ iwu na-akwadoghị nke iji ozi nke ụlọ ọrụ anyị ịhapụ ozi ịntanetị na ọha mmadụ, ozi ịntanetị ndị dị n'elu enweghị ihe jikọrọ ya na ụlọ ọrụ anyị.
2. companylọ ọrụ anyị enyebeghị ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ndị ọzọ ikike na mpụga ụlọ ọrụ anyị. Iji zere ịbụ onye a ghọgburu, ụlọ ọrụ na-anata email nwere ike ịjụ ozugbo site n'ịkpọ anyị ka anyị nyochaa izi ezi. (Ekwentị nlekọta ekwentị: 0311-68058177.)
3. Iji nye ntaramahụhụ maka mpụ, ụlọ ọrụ anyị ekpesara ngalaba na-ahụ maka nchekwa ọha gbasara mmebi iwu a akpọtụrụ aha n'elu, anyị na-eche enyemaka nke ngalaba na-ahụ maka nchekwa ọha na nyocha.
Na nchịkọta, ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na ngwaahịa na ọrụ slurry pump na ọtụtụ afọ. Companylọ ọrụ ahụ na-elebara ogo ngwaahịa anya dị ka ndụ ụlọ ọrụ, na-agbaso ụkpụrụ ọrụ ndị ahịa na-arụ ọrụ, na-eji ụlọ nkwakọba ihe kachasị oke na ndị ọkachamara kachasị azụ ahịa iji jeere ụlọ ọrụ ndị na-egwupụta akụ na ọha mmadụ ozi.